Akụkọ - Kwụsie ike n'ihe mgbaru ọsọ gị, ma nọgide na -agba ume.
Emere nzukọ nchịkọta ọkara afọ nke Yu Rucheng na 2021 na nsọpụrụ. N'okpuru nduzi nke onye isi njikwa Mr. Liu Jianjun, ndị ọkachamara nke ngalaba ahịa bịara na nrọ ha, na -achịkọta enweghị ọrụ na ọkara mbụ nke afọ, na ịhazi otu esi emezu ebumnuche na ọkara nke abụọ nke afọ, ma tinye aka na "ụlọ" nke Yu Rucheng, ma mee ka nrọ ahụ mezuo. Mee ka ntọala ya bụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Na mbido nzukọ a, Li Sixian, onye isi ngalaba azụmaahịa ụlọ, yana Yang Wen, onye isi ngalaba azụmaahịa nke mba ofesi, chịkọtara arụmọrụ ọrụ yana nweta ahụmịhe na ọkara mbụ nke 2021, wee bute mgbado anya na ntụzịaka nke ọrụ ahụ. ọkara nke abụọ nke afọ. N'ikpeazụ, ndị ọkachamara nke ngalaba azụmaahịa werekwara ọkwa iji chịkọta ma kọọ akụkọ ha.
Kwere, gbasie ike, na ume dị mma bụ isi okwu nke nzukọ ọkara afọ a. Na nzukọ a, anyị wusiri ntụkwasị obi anyị ike imezu ebumnuche anyị site na vidiyo abụọ. Anyị ghọtakwara ọrụ dị mkpa nke ịbụ onye otu ngalaba azụmaahịa Yu Rucheng site na akụkọ azụmaahịa na ebumnuche mbụ nke onye isi njikwa Mr. Liu Jianjun.
N'ehihie, na nzaghachi n'okwu ndị ọchụnta ego n'ahịa kwurịtara, osote onye isi njikwa duuru onye ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na-agagharị agagharị. Onye ọ bụla buru ụzọ kewaa n'ime otu iji kpaa nkata n'onwe ya. Ka emechara arụmụka na mkparita ụka anọ, a chịkọtara nsonaazụ mkparịta ụka na nkwado onye ọ bụla n'ime ka ọ bụrụ ihe ga -edozi nsogbu ahụ. N'ime usoro a, onye ọ bụla nọ na-arụsi ọrụ ike, na-akụkọta ọnụ mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ na-arụrịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ, mgbe ụfọdụ na-ekwe ka a mata ya, n'ikpeazụ wee nweta nkwekọrịta, na ọnụ ha nwetara ọmarịcha amamihe nke otu na imekọ ihe ọnụ.
Na ngwụcha nzukọ a, Maazị Liu kwubiri okwu ya: “2021 karịrị ọkara, ebumnuche anyị maka ọkara nke abụọ nke afọ na -agwụ ike ma jupụta na ihe ịma aka. Ekwenyere m na onye ọ bụla nwere ike ịrapara na ọrụ nke aka ha, nweta ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa, na -emezu ebumnobi mbụ ha, wee gaa n'ihu! " N'okwu, okwu ọ bụla na ahịrịokwu na -akpali ndị ọrụ niile nọ ya. Anyị kwenyesiri ike na n'ime afọ 2021, ngalaba ahịa Yurucheng ga -enwerịrị ezigbo nsonaazụ.